Soosaarayaasha Robot Spot Alxanka - Shiinaha Spot Alxanka Alaab-qeybiyeyaasha & Warshad
Qalabka alxanka leh Motoman Robot
Codsiyada Aaladda Alxanka ee loo yaqaan 'Robotic Spot Welding Application' waxay aad ugu badan yihiin Gawaarida OEM iyo Tier1 Body Shops, iyagoo si otomaatig ah isugu keenaya meydadka gawaarida iyo shirarkooda hoose. Waxaan iskaashi la sameynay baabuurta OEM-yada si loo abuuro aalado casri ah oo lagu hagaajiyo wax soo saarka dukaan jirka, iyo in loo hoggaansamo heerarka dukaanadooda, taasoo horseed u ah saldhig la rakibay oo ah toban-kun oo Motoman Robot ah adduunka oo dhan. Waxaan ku siineynaa xirmooyinka buuxa ee aaladaha aaladaha iyo teknolojiyadda halkan looga baahan yahay - mushaar bixinta, gaarista, isku-xirnaanta iyo xirmooyinka banaanka / xirmooyinka dharka iyo qoryaha baraha gacanta lagu hago.Waxaa jira meel ballaaran oo ah dalabka alxanka barta guud ee Warshadaha (kana baxsan baabuurta). YASKAWA Motoman waa lammaanaha saxda ah ee ku xaqiijinaya xalalka alxanka halkan.SP80, SP100 iyo SP165 waa aalado jilicsan oo qaabeysan oo la dhigi karo meel u dhow goobta shaqada isla markaana u oggolaaneysa in badeecada lagu soo saaro saldhigyo yar oo dib-u-helid ah. SP165, SP210, SP215, SP250 iyo SP280 waa aalado heer sare ah oo aalado alxamis ah leh raadad yar, xawaare sare iyo saxsanaanta meelaynta iyo - haddii loo baahdo - fiilooyin gudaha ah oo loogu talagalay qoryaha foorarsiga 7aad.
Qabashada Gacanta Robot, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, 6 Axis Qabashada Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta,